Mifandraisa aminay pejy - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Pejy mifandray aminay
Varotra, serivisy ary fanampiana.
Ny kely momba ny hoe iza isika, ary ny antony hamoronana ...
Ny fon'ny zavatra ataontsika dia ny fanirianay hanamora ny fandraharahana ho mora, tsotra ary lafo ho an'ny mpanjifantsika. Tsy tokony handoa sandry sy tongony izany, na mitaky fahaiza-manao IT manandratra mba hanao dokambarotra na hampiseho ny asanao.
Namorona Easy Multi Display izahay satria nisy rindrambaiko efa misy manontany be avy amin'ny mpanjifa. Mila fotodrafitrasa sarotra ary tsy tokony horesahina akory ny sarany andoavana isam-bolana izay sarany.
Izahay dia mikasa hamorona rindrambaiko tsotra sy mora ampiasaina ahafahanao mampiseho ny haino aman-jery misy anao araka izay tianao, miaraka amin'ny fepetra ara-teknika sy tsotra.
Ny antsipiriany momba ny orinasa
Nomery voasoratra anarana: 10062777
Laharana VAT: 289 8124 50
Tale: Guy Condamine, gco@virtual-cockpit.com
71-75 Street Shelton, Covent Garden, London WC2H9JQ
EMD dia zaraina amin'ny EEC avy amin'i TekAngel - RCS 897 992 657
NY TOA ANTSIKA HANAMPY ANAO HANAMPY ANAO
Manana lahatsoratra maro izahay izay hanampy anao mandritra ny fametrahana ny Easy Multi Display sy ny fampiasana azy. Aza misalasala mamaky ireto lahatsoratra ireto ao amin'ny "Ivontoerana fanampiana"Sokajy. Raha tsy hitanao ny valin'ny fanontanianao dia eo am-pelatananao ny ekipanay hikaroka vahaolana haingana araka izay tratra.
AHOANA NO HAMPAHERY?
TONGA SAOVY IZAO DIA AZONAO
Ho an'ny fanontaniana mialoha ny varotra, ny fanontanian'ny besinimaro dia fenoy ny endrika eto ambany. Ny iray amin'ny ekipanay dia hiverina aminao haingana araka izay azo atao.
TSY MAIMAIMPOANA TOVITRA IZY
Raha manana fanontaniana momba ny rindrambaiko ianao dia manoro hevitra ny hijery sy ny pejy fanampiana azontsika fikarohana. Kitiho eto ambany hanombohana ny fikarohana nataonao.
BOKY DEMO IZAO
BOKY TOROHITRA IZAO